crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Maxayna Dhexyaal: Hurgumo mise Hunguri?– Maxammuud C. Geeldoon | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Faallooyinka March 17, 2016	0 238 Views
Muqdisho, Soomaaliya (Himilonews) – Su’aasha kor ku xusani maaha midaan anigu maankayga ka keenay. Waa su’aal jirta oo dood weyn dhex dhigtay ku-xeeldheerayaasha cilmiyada buslshada, dhaqaalaha, iyo siyaasadda. Waana su’aal ay ila noqotay inaan maanta idin soo hordhigo, si aynu u wadaagno aqoonisweydaarsi ku saabsan aafada ummaddeenna Soomaaliyeed halakaysay iyo barta ay tahay inaynu maanta ka abbaarro.
Colaadda sokeeye waxay, sida qaalibka ah, ka unkantaa dawladda oo gabta xilka ay shacabkeeda u hayso. Xukunka dawladda ayaa waxaa maroorsada oo isku kooba ruux ama koox, kuwaasoo kutakrifala hantida dawladda iyo khayraadka ay dadku wadaagaan. Hay’adihii dawladda,xidhiidhadoodii, iyo xeerarkoodii rasmiga ahaa ayaa caynwareega oo macna beela, waxaanahalkoodii gala xidhiidho iyo is-fagaradya hoose oo aan la qorin lana shaacin, kuwassoo ku qotoma eex, naas-noojis, iyo kala-gudbin. Dawladdii waxaa kasoo hadha qalfoof iyo hummaag dawladeed (shadow state).1 Dabadeed waxaa lama huraan noqda in dadweynaha badidii ay u muuqato inay dawladdii sagratay. Markay dadweynuhu isku dayaan inay cawdaanna xadhig iyo cabbudhin bay dawladdu kula kacadaa. Hadda bal bartaa aynu ku yara hakanno.
Odhaah Marykan ah ayaa waxay tiraahdaa, marka dembi la baadhayo oo la furfuri kari waayo,follow the money (lacagta daba gal). Say wax innoogu iftiimaan, halla baadigoobo hantida qaranka iyo halkay marto?
Previous: Aqoon-yahan Japaniis ah oo gabdhaha dalkaas ugu baaqay inay wax dhalaan oo su’aalo la weydiinayo
Next: Mustaqbal oo u dabaal-degtay sanad-guuradii 4aad